ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အမှတ်တရကျောင်းတော်ရာ
ငယ်ငယ်က ခေါင်းလောင်းသံကြားရရင် စိတ်ထဲက တက်ကြွလာသလိုလို ကမ္ဘာမကြေသီချင်းဆိုရင် အားမာန်တွေပဲပြည့်လာသလိုလိုနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့တယ် ကျောင်းဝတ်စုံလေးကလည်း အသစ် ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလေးတွေ အသစ်နဲ့ခလေးဘ၀ ရဲ့ ပျော်စရာနေ့ ရက်တွေထဲမှာ ကျောင်းတက်ရက်တွေလည်း အပါအ၀င်ပေါ့ ။ကျောင်း အားကစားကြေး ပေးတာ နောက်ကျလို့ လည်း အားမငယ်ဘူး ကျောင်အကျီင်္ဖားဥတက်နေတာကို ၀တ်နေရပေမယ့်လည်း မရှက်တက်ဘူး မယာတွေကင်းတဲ့ ဖြူစင်ခဲ့တဲ့ မူးလတန်းကျောင်းသားဘ၀ ၊ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ ခဲ့ရဖူးသလို မိုးထဲရေထဲလည်း စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ကျောင်းပြေးပြီး မိုးရေဆော့ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အခု မိုးရာသီမှာ လွမ်းမိသား ။
မိုးဦးကျမှာ တုပ်ကွေးဖြစ်တက်ကြတဲ့ အချိန်ပေါ့ ကျောင်းတုန်းက အမှတ်တရလေးပါ ယောက်ျားလေးအဆောင်ဆိုတော့ ချောင်လည်းကျတယ် လူနေအိမ်ကလည်း မရှိသလောက်ပဲ တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီဆို ကူးတက်တော့ အဆောင်ကျောင်းသားက ၃၀ ကျော် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်း ကိုကူးတော့တာပဲ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အခြေနေကိုယ်သိ မဖြစ်ခင်ထဲက ကြိုပြီးဆေးသောက်ထားတယ် ။ ကိုယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဖြစ်နေကြ သူငယ်ချင်းတွေကို သက်သာရဲ့လား ဆေးခန်းလိုက်ပို့ ရမလားလို့ တောင်မမေးဘူးတဲ့ သူတွေ လည်းရှိကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဥပမာ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန် မိဝေး ဖဝေး နဲ့ ဆိုတော့ ပိုပြီးအားငယ်ရင် ရောဂါက ပိုဆိုး ကော ကိုယ့် နှဖူးလေးကို လာစမ်းပြီး သက်သာရဲ့လား သူငယ်ချင်းလို့တစ်ခွန်းလေးပဲ အားပေးစကားကြားလိုက်ရရင်ဝမ်းသာပြီး သက်သာသွားသလို ခံစားရတယ် ။ရှေးဦး သူနာပြုစုတာတော့ မဟုတ်ဘူး :P အဆောင်မှာတစ်ယောက်ယောက် နေမကောင်းဖြစ်ရင် ကျနော်က သူနာပြုပဲ ။ကျနော်က အဲ့လိုမျိုးတွေဆို နည်းနည်းဆရာကီး လုပ်တက်တယ် ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကကို မနေတက်တာ ။
ညသန်ခေါင်ကျော်ကြီး အိပ်နေတုန်း ဘေးခန်း ကနေမကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ငြီးသံကြားရင် မနေတက်တော့ဘူး အခန်းတံခါးကိုကျော်ဝင် သူ့ ပါသာ တုပ်ကွေးဖြစ်တာလား ဘာရောဂါလည်း သေချာ တစ်ခုမှမသိဘူး ကိုယ်တက်တာဆိုလို့နဖူးစမ်းကြည့်လို့ ပူနေပြီဆိုရင် အဆောင်မှူးအိမ်က ရေခဲသွားတောင်း ပြီးရင် ရေဖတ်တိုက်ပေးလိုက် နည်းနည်းပါးပါး နှိပ်နယ်ပေးလိုက် အမြဲဆောင်ထားတဲ့ မားမားခေါက်ဆွဲပူပူလေးတစ်ထုတ်ပြုတ်ကျွေး ပြီးရင်ဒီကိုဂျင်လေးတစ်လုံးတိုက်လိုက်တယ် ကိုယ်တက်တာကုန်ပြီးး) သက်သာလား မသက်သာလားတော့မသိ ။ အဲ့လိုတွေ လုပ်ခဲ့ပေးလို့ လည်း ကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်ရင် ရွာထဲက ဆေးခန်းကို လိုက်ပို့ ပေးကြ့ အိမ်ကပို့ လိုက်တဲ့ ပုဇွန်ထုပ်ကြော်တွေ ၊သရက်သီးသေနပ် ၊ ငါးခြောက်ကြော် အများကြီး လာကျွေးကြတယ် ကျနော်ကလည်း အစားငမ်းတာနဲ့။
အခုတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းပဲ လွမ်းနိုင်တော့တယ် မတွေ့ ရတာကြာပြီးး မိုးအရမ်းရွာတဲ့ညတွေမှာ အခန်းတစ်ခန်းမှာ လူတွေအများကြီး စု ပြီးရင် ဘယ်မေဂျာက Roll No ဘယ်လောက် ဘယ်စော် က ဘယ်လိုဖြောင့်တာ ဘယ်လိုကောက်တာ တွေကို စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် ပြောပြတော့လည်း နားထောင်ရတာပေါ့ဗျာ ;) မိန်းခလေး အဆောင်ရှေ့ ၀ိုင်းဖွဲ့( ဘီယာဝိုင်း) ဂစ်တာသွားတီးကြရင် ဘောမကန်ပဲနဲ့သံပရာသီစားတယ် သီချင်းသွားဆို ပြီးရင် ဘီယာမသောက်ပဲ အမြည်းကြီးပဲ တီးပစ်လိုက်တယ် ပိုင်တယ်ဟုတ် အကြံက နောက်နေ့ကျောင်းလည်းမပျက်တော့ဘူးဗိုက်လည်း တင်းတယ် ။ညနေတိုင်း ကျောင်းနားက သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူသွားနေကျ ရိုးဂိုးဘုရား နဲ့စားနေကျ ရေစိမ်မုန့် တီ ကိုလည်း စားချင်နေတာကြာပြီးး ။ အခုတော့လားး ရတာမလို လိုတာမရ ဆိုသလိုပဲ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဖုန်းပြောဖြစ်ရင် ငါလည်းကျောင်းတက်ချင်သေးတာ”လို့မျက်မှန်ကိုပြောမိရင် သူပြန်ပြောတာက“ ငါက ကျောင်းပြီးချင်ပြီ” ပိုက်ပိုက်တွေ ကုန်လွန်းလို့ တဲ့ ။ ကျောင်းတော်က အမှတ်တရတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြောလို့ ကုန်မှာမဟုတ် မေ့နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ အမှတ်တရတွေပါပဲ ............။
ဟုတ်တယ် ..ငါလဲ ကျောင်းပြီးချင်ပြီ..။ပိုက်ပိုက်ကုန်လို့
တိုတယ်၊ ဖတ်ရတာ အားမရပါ၊ အကျယ်ရေးပါဦး...
ဘယ်စော်ဖြောင့်တာ ဘာညာလာပြောတာ စိတ်မ၀င်စားဘူး... ???? အလိုလို.... အလိုလို... :D